Kala shakiga madaxda Alshabaab oo sababay in Beel-beel ay isku aruursadaan – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Kala shakiga madaxda Alshabaab oo sababay in Beel-beel ay isku aruursadaan
Allhadaaftimo February 2, 2019 Uncategorized
Warar hoose oo laga helayo gudaha Alshabaab ayaa sheegaya in Hogaamiyayaasha ugu sareeya Ururkaasi uu soo wajahay Kala shaki xoogan.
Walaacan iyo xiisadan ka dhex jirta maamulka Al shabaab ayaa waxay ka dambeysay kadib markii la sheegay in Masuuliyiin sar sare ay doonayaan inay u goostaan ururka Daacish oo dagaal kula jira Al shabaab.
Qaar kamid ah Hogaamiyayaasha Al shabaab ayaa iska bedelay ilaaladii waardiyeyn jirtay iyagoo soo dhaweystay Dhalinyaro beeshooda ah.
Madaxda sare ee Al shabaab ayaa Sirdoon qarsoon ku dhex fidiyay Hoggaamiyayaasha qaarkood si dhaq dhaqaaqdooda loola socdo.
Dagaalka u dhaxeeya Al shabaab iyo Daacish ayaa meel xun gaaray, iyadoo ugaarsi xoogan ay iskuga hayaan Saraakiisha ugu sareysa Labada dhinac, waxaana dhowr jeer dagaalo xoogan ay dhex mareen ciidamo ka kala socda labada dhinac.
Labadan Kooxood ayaa khal-khal ku haya amniga Puntland, iyadoo midba mida kale ay loolan ugu jirto inay ku gacan sareyso gobolka Bari, waxayna lacago baad ah ka qaadaan ganacsatada Boosaaso, sidoo kale waxay Dilal qorsheysan isugu geystaan magaalada Muqdisho iyo Gobalada kale ee Dalka.
Previous DEGMADA SAYLAC OO XAALAD NOLOL XUMO KA JIRTA
Next Guddida Tacliinta Sare ee wasaarada waxbarashada Somaliand ayaa waxaa ay shaaciyeen in ay gabi ahaan-ba ay mushaharkii ka joojiyeen wasiirkii hore ee maaliyada Md Yuusuf